Xaafado guryaheeda aysan lahayn albaabo!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka August 19, 2017	0 319 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Rumeyso ama harumeysan, waxaa jirta xaafad dalka Hindiya ku taalla oo guryaha, xarumaha wax-barashada iyo ganacsiga, iyo xittaa bangiyada aysan lahayn albaabo. Lacagta cad waxaa lagu ridaa qasnad aan xirnayn, waxaana mararka qaar ku jira dahab qaali ah.
Previous: Wax ka baro umadaha ugu isir ku faanka badan caalamka.
La kulan – Maqaayadda guur-guurta ee Maandeeq.